Aza mimenomenona | Hevitra MPANOHARIANA
2007-09-25 @ 08:24 in Politika
Samy tezitra dia mifanome tsiny ny mpikarajia tamin’ny vokatry ny fifidianana farany teo iny. Fifidianana izay ho solombavambahoaka manaraka indray. Raha nisy olona iray nimenomenona tamin’ny zava-misy andavanandro, ka nahateny “tsy nahy” fa tsy nifidy noho izay fahasahiranana izay, dia nisy namaly izy hoe “aza mimenomenona rehefa tsy nifidy”. Kanjo nisy namaly ihany koa io olona farany io…raikitra amin’izay ny fifanakianana…amin’ny fomba mihaja ihany satria imasom-bahoaka tsinona no iresahana amin’ny alalan’ny haino aman-jery…eo amin’ny nifidy sy ny tsy nifidy.
Teto dia tsy ny mpanohana sy ny mpanohitra no nifanjinja fa ny nifidy sy ny tsy nifidy kosa. Mariho tsara fa ny nandrotsa-bato tamin’iny fifidianana farany teo iny dia 25% ihany fa ny 75% tsy nandeha sady tsy nivonona ho amin’izany rahateo. Tsy tahaka izany kosa teo amin’ny amin’ny karajia fa tena nifanahantsahana mihitsy. Samy namoaka ny heviny. Raha, ny maro an’isa fotsiny no jerena ka mody atao hoe manaraka ny marina dia diso izany ireo izay nifidy. Misy ny miteny hoe leo tanteraka amin’ity zavatra mitohy ity nefa ny eo ihany no eo fa tsy misy fiovana.Izany hoe eo imason’ny nifidy dia manana ny rariny ny fahakiviana sy ny tsy firaharahiana. Nefa ireo ihany no miteny fa giazan’ny vitsy an’isa ny zavatra tokony atao rehetra.
Izaho, fantatrareo fa nifidy, dia miezaka ihany ny hahalala ny tena antony lehibe nahatonga ny olona nanapa-kevitra tsy nifidy. Raha namaky kely ny gazetin’ny mpitondra ankehitriny, amin’ny teny malagasy aho dia nahita fa…milaza ny tsy fananan’ny olona fitokisana hatrany ny mahatonga ny avy amin’ny antoko mpanohitra tsy tafiditra ao amin’ny antenimieram-pirenena. Raha raisina io hevitra navoakan’”ny vaovaontsika” io dia manambara fa tsy te-hifidy mpanohitra ny olona. Etsy andanin’izay ihany koa anefa dia tsy vitsy toy izany ihany koa ireo tsy te-hifidy izay olona narotsaky ny mpitondra. Tsy misy hofidiana izany ny maro raha jerena amin’izao. Ny antoko mpiara-dia amin’ny mpitondra indray dia heverina avy hatrany ho kely hery na mety hivadika fironana. Izay no fahazoako azy aloha hatramin’izao.
Inona tokoa ary ny olana tsy nifidianan’ny olona ny mpiara-dia indray farafaharatsiny? Dia tenina mpanara-baovao iray indray no raisiko eto hoe: Ny avy amin’ny antoko mpanohitra mamelively ny tim, nefa setrin’izany dia ny antoko mpiara-dia nandrotsaka kandida hatrany no velesin’ny tim. Zavatra mahavariana azy io tranga niseho matetika io nandritra ny fampielezan-kevitra. Aminao, inona koa re no mety ho nahatonga ny olona tsy nifidy e?
Sendra nanadalo tany an-tanindrazana aho nandritra ireny fampielezankevitra ireny dia izay nivaky tamiko dia nilaza fa tsy hifidy satria tofoka.
Ny eo ihany no eo, ny mpitondra izy ny mpanohitra tsy dia samihafa fa tsy maintsy mikaroka izay hohanina isan'andro ihany.
Tsy fahatokisana ny mpanao politika amin'ny ankapobenay izany raha fehezina fohy.
Nampidirin'i tomavana @ 10:38, 2007-09-26 [Valio]